ပြည့်ဖြိုး (နည်းပညာမျှဝေခြင်း): November 2012
ကွန်ပြူတာမှာ Task Manager ပျောက်သွားရင်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဖျောက်ထားတဲ့ ကွန်ပြူတာတွေ
မှာဘဲဖြစ်ဖြစ် Task Manager လိုမျိုး သုံးနိုင်မယ့် System Explorer v3.9.9.5004 ကို သူငယ်ချင်းများအ
တွက်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Portable Version လေးတင်ပေးထားတဲ့အတွက် Memory Stick ထဲ
ထည့်ပြီး သွားလေရာမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ လွယ်ကူစွာဘဲ Double Click နှိပ်ပြီး သုံးနိုင်ပါတယ်။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 10:40 PM No comments:
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 8:22 PM 1 comment:
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 3:50 AM No comments:
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 10:45 PM No comments:
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 8:44 PM2comments:
ပထမဆုံး Root လုပ်ဖို့အတွက် ဒီ update.zip ဖိုင်လေးကို ဒေါင်းယူထားလိုက်ပါ...။
ပြီးရင် မိမိ ဖုန်းက SD Card လေးထဲ update.zip ဖိုင်လေးကိုကူးထည့်ပေးလိုက်ပါ
မြန်မာစာ , မြန်မာ Keyboard ထည့်နည်းတွေကိုတော့ ဒီ Label မှာရှာပြီး အဆင်ပြေမဲ့ နည်းတစ်ခုခုနဲ့ ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်.....။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 1:16 AM 1 comment:
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 9:15 PM2comments:
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 10:22 PM2comments:
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 9:18 PM 1 comment:
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 8:43 PM 1 comment:
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 7:48 PM No comments:
Download Another Lin For Root Zip
ပြီးရင်တော့ Rar ဖိုင်ကို Extract လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးကျရင် TPSparkyRoot.bat ဖိုင်လေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်….
ပြီးရင်တော့ ပထမဆုံး Reboot တစ်ခါကျသွားပါလိမ့်မယ်…..
ပြီးရင်တော့ Enter တစ်ချက်လောက်ထပ်ခေါက်လိုက်ပါ။
၃ခါလောက် Reboot ကျသွားပြီးပြန်တက်လာရင်တော့ Root ရပါပြီ…..။
Bat ဖိုင် run ပြီးရင် ခဏစောင့်ပါ ဖုန်း restart ကျသွားပါလိမ့်မယ်။ cmd box ထဲမှာလည်း press enter key to continue ဆိုတာ ပေါ်နေမယ် ဘာမှမနှိပ်ပဲ ဖုန်းပြန်တတ်လာတာကို စောင့်ပါ။ ဖုန်းပြန်တတ်လာမှ ကွန်ပြူတာမှာ enter နှိပ်ပါ။ အဲလို သုံးခါ restart ပြန်စောင့် သုံးခါ enter နှိပ်ပြီးရင်တော့ ဖုန်းမှာ super user ဆိုတဲ့ icon ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါ Root လုပ်ပြီးပြီဆိုတာ ပြနေတာပါခင်ဗျာ။
၁. SP flashtool ကို download ဆွဲပါ..
၂. Driver ကို download ဆွဲပါ…
၃. A690 root ကို download ဆွဲပြီး sd card ထဲကူးထည့်ထားပါ…
၄. Recovery file ကိုလည်း download ဆွဲပါ….
၅. ပြီးရင် phone ကို ပိတ်ပြီး battery ဖြုတ်လိုက်ပါ……
၆. Battery ဖြုတ်ရက်သား computer နဲ့တွဲပါ…
၇. Unknown device ပေါ်လာရင် device manager ထဲဝင်ပြီး update driver လုပ်ပြီး source
ကိုရွေးပေးပါ…..source ကို a690 ကိုပေးပါ….
၈.Driver install လုပ်ပြီးရင် SP flashtool ကို ဖွင့်လိုက်ပါ….ပြီးရင် scattering ကိုရွေးပြီး..recovery ထဲက
android scattering ကိုရွေးပါ…ပြီးရင် download ကို နှိပ်လိုက်ပါ….complete ဖြစ်သွားရင်…phone ကို
ဖြုတ်ပြီး battery ပြန်တပ်ပြီး recovery ထဲဝင်ပါ…ပြီးရင် recovery ထဲကနေပြီး install from SD ထဲက
နေ ပြီး root.zip ကိုပေးလိုက်ပါ…ပြီးရင် reboot လုပ်လိုက်ရင် ပြီးပါပြီ…..
(4Shared Accounts: Username: aung.uvs@gmail.com Passwords: 12213456)
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 12:15 AM No comments:
အတွဲ(၁၃)၊ အမှတ်(၄၆) ၂၆.၁၁.၂၀၁၂
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 11:21 PM No comments:
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 8:29 PM No comments:
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 8:11 PM No comments:
Red Alerd -3(Mediafire Download)
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 10:16 PM 1 comment:
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 7:38 PM No comments: